Shiinaha warshad shiinaha CNC Double Double column Turret Lathe | Oturn
Waxay ka dhigi kartaa mid qallafsan oo sax ah u rogista dusha sare ee gudaha iyo dibedda, dusha sare, diyaaradda, wejiga madaxa, jeexitaanka, goynta, xargaha joogtada ah ...
1. Mashiinkaan taxanaha ahi wuxuu ku habboon yahay ka shaqeynta warshadaha matoorrada, marawaxadaha, aerospace, macdanta iyo sidoo kale birta, iwm.
2. Waxay ka dhigi kartaa mid qallafsan oo sax ah u rogeysa dusha sare iyo silsilad dusha, dusha sare, diyaaradda, wejiga madaxa, jeexitaanka, goynta, goynta toosan ee joogtada ah, jarista xargaha, iwm.
3. Nidaamka xakamaynta CNC ee Siemens ama Fanuc waa la heli karaa.
4. Miiska shaqadu wuxuu qaataa guideway hydrostatic guide, dunmiiqa waa inuu isticmaalo NN30 (Fasalka D) dhalista oo uu awood u yeesho inuu si sax ah u soo jeesto, Awood u lahaanshaha dhalista ayaa wanaagsan.
5. Kiiska loo yaqaan 'Gear case' waa inuu isticmaalo 40 Cr gear of gear grinding. Waxay leedahay saxnaan sare iyo buuq yar. Labada qayb ee Haydarooliga iyo qalabka korontada labadaba waxaa loo isticmaalaa alaabada caanka ku ah Shiinaha.
6. Dariiqooyinka hagaha ah ee dahaarka leh ee caaga ah waa kuwo la qaadan karo.
7. Farsamada macdanta lathe waa adeegsiga farsamo xumbo luntay (gaagaaban LFF). Qaybta jilayaasha ayaa leh tayo wanaagsan.
8.We isku duubnaan karnaa nidaamka qaboojinta, ka baxsashada nidaamka jibbaarada iyo gaashaanka ugu dhow ee qalabka dhameystiran iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
9.Lathe-ga shaashadda stepless ma aha oo kaliya shaqooyinka u rogaya sida lathe caadi ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqooyin goynta toosan iyo goynta xargaha.
Ugu badnaan dhexroor rogaya boostada qalab taagan
Dhexroor miiska shaqeeya
Ugu badnaan dhererka shaqada
Ugu badnaan miisaanka wok-piece
Xawaaraha ayaa ka dhacay miiska shaqada
2 ～ 63
0.85 ～ 40
0.6 ～ 25.4
0.5 ～ 22
Tallaabada wareegga miiska shaqada
Qaddarka feed feed
mm / daqiiqo
1 ～ 500
Tallaabada feed feed post
Max miisaanka miiska shaqada
Dhaqdhaqaaqa toosan ee qalabka saxda ah
-15 ～ 1400
-15 ～ 2150
-15 ～ 2750
-50 ～ 3350
Dhaqdhaqaaqa jiifka ah ee qalabka bidix
Dhaqdhaqaaqa toosan ee qalabka bidix ee boostada
Xagasha lulid qalabka 'tool'
-15 ～ 30
Awooda mootada weyn
5180 × 4560 × 4680
7300 × 5040 × 5720
7300 * 5040 * 5720
7600 × 5500 × 6430
13500 × 6500 × 7500
Hore: Qodista Iyo Taabashada Mashiinka isku dhafan
Xiga: Nooca Gawaarida 5-dhidibka Milling Machine